XOG CUSUB: Maxaa ka jira in ciidanka Jubuuti ee AMISOM oo muddo sanad ah mushaar qaadan? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG CUSUB: Maxaa ka jira in ciidanka Jubuuti ee AMISOM oo muddo...
Muqdisho (Halqaran.com) – Ciidanka dowladda Jabuuti ee ku jira howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa in aysan mushaar qaadan tan iyo December sanadkii 2018-kii.
Midowga Yurub oo bixiya Mushaarka AMISOM ayaa lacagtaas ku wareejiyay Midowga Afrika,waxaana Askarigiiba helayaa bil kasta lacag dhan $800 oo doollarka Mareykanka ah iyada oo Midowga Afrikana ku wareejiyay dowladda Jabuuti.
Midowga Yurub ayaa 20% dhimay mushaarka Ciidanka AMISOM sanadkii 2016kii, waxaa ay sidoo kale dowladaha ay Ciidamadaas ka socdaan ayaa waxaa ay sii jartaan 20% oo ah waxa lagu sheegay qarashaadka maamulka.
Askariga ayaa waxaa u soo haraya $800 doollar bilkasta, taas oo inta badan Askarta kale ay qaataan, hayeeshee kuwa Jabuuti ka cabanayaan in aan wali la siin lacagtaas.
ciidanka Jubuuti ee AMISOM
muddo sanad ah mushaar qaadan